एउटा वीभत्स हत्याकाण्डको नालीबेली
विष्णु बूढानीलकण्ठस्थित साढे २ तल्ले एउटा घर । सवारी पार्किङका लागि कम्पाउण्ड । चारैतिर गमलाभरि राखिएका फूल । दक्षिणतर्फ राखिएको घरको मूल ढोका । बाहिरबाट हेर्दा घर जति सून्दर थियो, भित्र बस्ने परिवारका सदस्यहरूको मन त्यति नै कुरूप हुँदै गएको थियो ।
त्यसैको परिणाम २७ पुस २०६८ मा त्यही सुन्दर घरभित्र अकल्पनीय घटना भयो । सशस्त्र प्रहरी बलका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरे । उक्त हत्याकाण्डले नेपाली समाज तरङ्गित र आतङ्कित पार्‍यो ।
उक्त हत्या एउटा भीआईपी हत्याकाण्ड त थियो नै, हत्यापछि गीताको लास नै गायब बनाउने प्रयास डीआईजी कोइरालाले गरेका थिए । त्यही हत्याकाण्ड करिब १० वर्षपछि फेरि चर्चामा आएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले, त्यसमा पनि प्रमुख न्यामूर्ति प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले नै गरेको उक्त हत्याकाण्ड र हत्याकाण्डमा अपराध पुष्टि भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका उनै कोइरालाको सजाय कटौतीको फैसला गरेपछि न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आममानिसको आशा र विश्वासमा गम्भीर चोट लागेको छ ।
गीताको हत्या हुँदा उक्त घरमा उनी एक्लै थिइन् । उनीसँग बस्दै आएका कान्छा छोरा आर्यन कोइरालालाई पनि रञ्जनले २७ पुस बिहानै आफ्नै घर इचङ्गुनारायण पुर्‍याइसकेका थिए ।
गीताले उक्त घर बुबा हरेराम ढकालले दाइजोका रूपमा दिएको जग्गामा निर्माण गरेकी थिइन् । त्यसैले उक्त घरमा रञ्जनले बस्न छाडेको करिब ५ वर्ष नै भइसकेको थियो । २०५० सालमा गीताले कोइरालासँग मागी विवाह गरेका थिए ।
विवाहको १० वर्षसम्मको अवधिमा उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर नै रह्यो । रञ्जनले गीताबाट सन्तानका रूपमा २ छोरा आयुस र आर्यन पाएका थिए ।
त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा आएको उतारचढावले गीताको इहलीला समाप्त भयो । रञ्जन सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काट्न डिल्लीबजार सदरखोर पुगे ।
किन एकाएक चर्चामा रञ्जन ?
श्रीमतीको हत्या गरेको १० दिनपछि ८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेका कोइराला ५ दिनअघि ८ साउनमा जेलमुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको १५ असारको फैसलाले रञ्जनले पाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायमध्येको ११ वर्ष घटाएपछि उनी जेलमुक्त भएका हुन् ।
यसअघि रञ्जनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको इजलासले ७ वैशाख २०७१ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले समेत २३ मंसिर २०७२ मा कोइलाको सर्वस्वसहितको फैसला सदर गरेको थियो ।
जिल्ला र उच्चअदालतको उक्त फैसला चर्को हुने भन्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीले उनको फैसला घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना फेसला गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने विचार गर्दा मृतक गीता ढकालबाट जन्मिएका २ सन्तान अभिवावकविहीन र शिक्षा, दीक्षा संरक्षण र अभिभावकविहीन हुँदा उनीहरूमा दूरगामी असर पर्ने र सजाय चर्को देखिएको चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदन प्रतिवादीलाई मुलुकी अदालती बन्दोबस्ती १८८ र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्यन ऐन, २०७४ को दफा 'क' बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना सजाय गर्दा पनि मक्सद पूरा हुन्छ ।’
तर, सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चर्को विरोध भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलकनका लागि दिएको निवेदनअनुसार आइतबार सर्वोच्चका ३ जना न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले जन्मकैदको सजाय घटाएर ८ वर्ष गर्ने सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको इजलासको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका ४ वटा नजिरको बेवास्ता गरेको पाइएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जनाएको छ । अब बस्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रञ्जनविरुद्धको अभियोगको छिनोफानो गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलालाई अब बस्ने पूर्ण इजालासले बदर गर्दै जिल्ला अदालतको ओदशलाई सदर गरे कोइराला फेरि जेल जानेछन् ।
को हुन् रञ्जन ?
रञ्जन नेपाल प्रहरीको ९०औँ प्रहरी टोलीका सदस्य हुन् । उनी २९ माघ २०४६ देखि नेपाल प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । उनको नाम प्रहरी निरीक्षकमा निस्किँदा उनी शीर्ष ५ जनाभित्रै परेका उनका ब्याची पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशी सम्झिन्छन् ।
‘रञ्जन राम्रो प्रहरी अफिसर थियो । सँगै तालिम गरेका थियौँ । हामी डीएसपी हुँदासम्म एउटै सङ्गठनमा रहेर काम गर्‍यौँ । पछि रञ्जन एक तह माथि डीएसपीबाट एसपी भएर सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गर्‍यो, त्यसपछि हाम्रो भेटघाटमा कमी आयो । पछि कसरी श्रीमती हत्या जस्तो अपराध गर्न पुग्यो, त्यो मानसिकता कसरी आयो, हामी पनि अचम्ममा परेका थियौँ’, पूर्वडीआईजी जोशीले भने ।
रञ्जनले श्रीमती हत्यापछि जेल जीवन भुक्तान गरिरहेका बेला साथीको नाताले डिल्लीबजार कारागार भेट्न पुगेको जोशी सम्झिन्छन् । ‘जेलमा बस्दा पनि साथीकै हैसियतमा घटनाका बारे चासो राख्दा केही बोलेनन्, बरु कुरा मोडी मात्रै राखे’, जोशी भन्छन् ।
तालिममा नाम निस्किएका ३६ जनामध्ये सबैभन्दा मिल्ने साथी भने रञ्जन र राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए । तर, उनै राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै मिल्ने साथीमाथि लागेको हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो ।
डीआईजी कोइरालाले श्रीमती गीताको हत्या गरेका बेला काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठले एसएसपीबाटनै अवकास पाएका हुन् ।
उनले अनुुसन्धानपछि आफ्नै साथी बहालवाला डीआईजी कोइरालाको हातमा हत्कडी लगाएका हुन् । ‘म प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत थिएँ । साथीभाइ, आफन्त भनेर अनुसन्धान रोक्ने कुरा हुँदैन थियो । अपराधमा कसको के संलग्नता भनेर खोज्ने हो । साथीको ठाउँमा बुबाले नै अपराध गरेको भए पनि छाड्ने कुरा अनुसन्धान अधिकृतका लागि हुँदैन । मैले त्यही गरेको हो’, पूर्वडीआईजी श्रेष्ठले भने ।
अहिले रञ्जन जेलमुक्त भइसकेका कारण धेरै कुरा भने बोल्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यसरी गरेका थिए श्रीमती गीताको हत्या
३१ जेठ २०५० मा विवाह गरेका रञ्जन र गीता विवाहको १० वर्षपछि २०६० सालपछि छुट्टाछुट्टै बस्दै आएका थिए । यसबीचमा गीता र रञ्जनको सम्बन्ध मिल्नुको साटो झनझन बिग्रिँदै गयो ।
१४ मंसिर २०६८ मा गीताले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मानो-चामल मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यसको ४ महिनापछि रञ्जन ११ महिने नेसनल डिफेन्स तालिमका लागि चीन गएका थिए । त्यसको ५ महिनामै उनी २१ पुसमा २०६८ मा नेपाल फर्किए । कोइराला फर्किएको सूचना सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकलाई थाहा थिएन ।
आफ्ना ड्राइभरलाई विमानस्थलमा लिन बोलाएका थिए उनले । कोइरालालाई लिन उनकी प्रेमिका तारा रेग्मीसमेत विमानस्थल पुगेकी थिइन् । २७ पुससम्म कोइराला प्रेमिका तारासँग आफ्नै घर इचङ्गुनारायण बसे ।
२७ गतेसम्म उता गीतालाई रञ्जन नेपाल फर्किएको थाहा थिएन । २७ गते बिहान कोइराला गीता बस्दै आएको घर बूढानीलकण्ठ पुगे । गीतासँग केही नबोली उनीसँग बस्दै आएका कान्छा छोरा आर्यन कोइरालालाई आफू बस्दै आएको घर ल्याए ।
गीता एक्लै बूढानीलकण्ठमा बसेकी थिइन् । यता, कोइराला गीताको हत्या गर्ने र कुनै अज्ञात ठाउँमा लगेर जलाउने योजनासहित आफ्ना ड्राइभर शंकर पौडेललाई करिब २ सय लिटर पेट्रोल जम्मा गर्न लगाएका थिए ।
शंकरले आफूले डीआईजी कोइरालाले भनेबमोजिमको पेट्रोल जम्मा गरेको बयान अदालतमा कोइराला पक्राउपछि दिएका थिए । कान्छा छोरा आर्यन र जेठा छोरा आयुसलाई २७ गते टेनिस खेल्न सशस्त्र प्रहरी बलको हलचोक पुर्‍याएका थिए । रञ्जनकी श्रीमती गीता एक्लै बूढानीलकण्ठ घरमा थिइन् ।
त्यही मौकामा कोइराला बूढानीलकण्ठ पुगेर गीताको दिउँसै हत्या गरेर कोठामा बन्द गरेर बाहिरी गेटमा समेत ताला लगाएका थिए । रञ्जनले गीताको हत्या स्वीकार गरे पनि गीताले नै भेट्न जरुरी छ भन्दै भेट्न गएको र त्यहीँ विवाद हुँदा उनको कोठाको भित्तामा टाउको ठोक्किएर मृत्यु भएको बयान दिएका थिए ।
तर, प्रहरीको घटना मुचुल्कामा भने कोइरालाले गीता बस्ने कोठामा उनको घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट कोइरालाले गीताको पूर्वयोजनाअनुसार नै हत्या गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
हत्या गरेकै राती कोइरालाले गीताको लासलाई मकवानपुरको पालुङ लगेर जलाएका थिए । उनले सशस्त्र प्रहरी बलको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडीमा गीताको लास पालुङ लगेका थिए ।
२८ गते बिहानै स्थानीयले जलेको र विक्षिप्त अवस्थामा रहेको लास देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले लास जलाएको स्थानमा गीताले लगाएको घडी भएको पुष्टि गरेपछि अनुसन्धानले लय समातेको थियो । त्यसबीचमा रञ्जन पक्राउ परेनन् ।
प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा साँघुरो पार्दै थियो । ८ माघमा रञ्जन फेरि गीताको लास जलाएको ठाउँ पालुङ पुगे । स्थानीयले शंकाको आधारमा साेधखोज गरे । उनी स्थानीयसँग 'सशस्त्र प्रहरी बलको हाकिम हुँ' भन्दै उम्किए । तर, काठमाडौं फर्किंदै गर्दा नागढुंगामा प्रहरीले उनलाई च्याप्प समातेर हिरासत पुर्‍यायो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १२, २०७७, १५:४०:००